Xbox One မှာ S ကိုရရှိနိုင်သြဂုတ်လအတွင်း 4K ရုပ်ရှင်တွေနှင့် HDR ကိုပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ - သတင်း Rule
Xbox One မှာ S ကိုရရှိနိုင်သြဂုတ်လအတွင်း 4K ရုပ်ရှင်တွေနှင့် HDR ကိုပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကဂိမ်းစက်ကိုကျုံ့ 40% နှင့်ဒီဇိုင်း Controller ကိုထည့်သွင်း, Sony ကအတူ console ကိုစစ်အတွက် IR blaster နှင့် front-facing ကို USB port ကို
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Xbox One မှာ S ကိုရရှိနိုင်သြဂုတ်လအတွင်း 4K ရုပ်ရှင်နှင့် HDR ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 18 ဇူလိုင်လအပေါ်များအတွက် 2016 14.46 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Microsoft ရဲ့ slimmed-Down နှင့် 4K-ရုပ်ရှင်နိုင်စွမ်း Xbox One မှာ S ကို£ 350 ကုန်ကျမည် ($400) နှင့်မှမရရှိနိုင်ဖြစ်2US မှာသြဂုတ်လ.
အသစ်, 40% သေးငယ်တဲ့ console က built-in power supply ရှိပါတယ်, တစ်ဦး front-facing ကို USB port နဲ့တစ်ဦးမှာ IR blaster. ဒါဟာနောက်ပိုင်းမှာရရှိနိုင်မယ့် 1TB နှင့် 500GB option နဲ့အတူသိုလှောင်မှု 2TB နှင့်အတူဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ 2TB Xbox One မှာ S ကို Microsoft ရဲ့စတိုးကနေဗြိတိန်တွင်သြဂုတ်လအစောပိုင်းတွင်အတွက်ရရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်, အချို့သော Third-party လက်လီအရောင်းဆိုင်များအပေါ်ကြိုတင်မှာယူမှုပေးပို့စာရင်းနှင့်အတူ 31 သြဂုတ်လ.
၏ The One S ဟာသေးငယ်လွှတ်ဂိမ်း console ကထုတ်လုပ်သူများ၏လမ်းကြောင်းသစ်အောက်ပါအတိုင်း, သူတို့ရဲ့လက်ရှိမျိုးဆက် consoles စပိုပြီးအာဏာအကျိုးရှိစွာတည်းဖြတ်မူများကိုပိုပြီးအစွမ်းထက် components နဲ့ updates တွေကိုထုတ်လွှတ်မီက. အသစ်ပါးလျသော Xbox လည်းတိုးတက်လာသောချုပ်ကိုင်ဘို့လက်ကိုင် textured သောဒီဇိုင်း Controller ကိုအတူပါလာလိမ့်မယ်, ကြီးမြတ်ကြိုးမဲ့အကွာအဝေးနဲ့ Bluetooth.
အဆိုပါ Xbox One မှာတည်းဖြတ်မူ Blu-rays နဲ့သစ်မြင့်မြင့်မှာ dynamic range ကိုမှ 4K ရုပ်ရှင်ပြန်ဖွင့်ထောကျပံ့မညျ (HDR) တစ်ဦး HDR-တိုင်ကြားစာတီဗီနှင့်အတူ display ကိုအပေါ်အရောင်များ၏အကွာအဝေးနှင့်အတိမ်အနက်ကိုတိုးပွါးကြောင်းဗီဒီယိုစံ.
ဒါဟာသူ့ရဲ့ပစ်လွှတ်ကတည်းက console ကိုပထမဦးဆုံးအဓိကအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ် 2013. Sony ကလည်းတစ်ဦး updated PlayStation အပေါ်အလုပ်လုပ်4console ကို, Play Station ကအမည်ရှိခံရဖို့ကောလဟာလသတင်းများအရ4Neo ကို, လည်း 4K Ultra HD Compatibility ကိုဆက်ကပ်တံ့သော.
Microsoft က၏အဆုံးအားဖြင့် Xbox One မှာစီမံကိန်း Scorpio အတူ Xbox One မှာ S ကိုလိုကျပါမညျ 2017, ဂိမ်းကိုထောကျပံ့ဖို့မျှော်လင့်ထားသော, မယ့်ရုပ်ရှင်တွေ, 4K ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ် HD ကို virtual reality display ကို.
အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ slimmed-Down လယ်ပိုင်းမျိုးဆက် update ကိုလွှတ် Sony ရဲ့ PlayStation ဆန့်ကျင် Xbox One ရဲ့ရောင်းအားလိုငွေပြမှုကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါလိမ့်မယ် 4, သောက၎င်း၏ကတည်းက 40 consoles စပတ်ပတ်လည်ကိုရောင်းချခဲ့သည် 2013 Microsoft ရဲ့ခန့်မှန်းခြေ 20 မီတာ Xbox One မှာ consoles စဆန့်ကျင်ပစ်လွှတ်.
လေ့လာဆန်းစစ်သူကုမ္ပဏီ IHS ကနေ Data ကို 29m အောက်မှာ, Xbox သူများကိုယခုနှစ်အကုန်တွင်ရောင်းချခဲ့လိမ့်မည်အကြံပြု, 53m PS4s နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်.
Scorpio မြင့်တက်: Xbox One မှာနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းရဲ့အနာဂတျအတှကျ Microsoft ရဲ့အစီအစဉ်ကို
22302	2 အပိုဒ်, computing, ယဉ်ကျေးမှုကို, အားကစားပြိုင်ပွဲ, Microsoft က, ရှမွေလသည် Gibbs, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ, Xbox ဂိမ်း, Xbox One မှာ
← ပိုကီမွန် Go ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 11 ထိုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲပါလိမ့်မည်ကြောင်းဗွီဒီယိုဂိမ်း Trends →